Inona No Mitranga Ao amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Kenyana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2018 17:43 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jiona taona 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy) Sary tany amin'ny Haidhuru
- Nambara vao haingana ny tetibola Keniana ka naneho hevitra momba izany ny tontolon'ny bilaogy Keniana. Nanamarika Ramatoa K fa na dia tsy manam-pahaizana momba ny teti-bola aza izy, hatraminy “nisian'ny Trano manontolo-feno an'i Jack / Jill Arses izay nanatrika ny zava-drehetra. Hitako fa raha ny tombatombana, azoko atao tsara ny miresaka momba ny tetibola tahaka azy ireo!” Ah … ny hatsaran'ny bilaogy … manome fahafahana ho an'ny olona mba hanome fomba fijery hafa (tena ilaina). Bankelele kosa manasongadina ireo fiovana lehibe.
- Milaza ny governemanta Keniana fa mikasa handràra ny fifohana sigara eny amin'ny toeram-bahoaka izy, anisan'izany ny, “toerana fisotroana toaka, fiangonana sy ny kianjan'ny fanatanjahantena.” araka ny tatitra iray. Fiangonana? “Iza no mifoka sigara any am-piangonana?” hoy i Mama Junkyard manontany.
- Bankelele indray miresaka momba ny tranonkala voalohany momba ny fifidianana ao Kenya.
- Thinker manadihady ny tantara mitohy.
- Nicholas Gichu kosa mampahafantatra antsika izay ataony. Manomboka amin'ny andro izay “fanaovam-beloma ny hatsiaka mamirifiry sy fiarahabana ny ngoly na dia mitafy toy ny Rosiana sasany mandritra ny ririnina bila (tsy misy) vodosky aza!”
- Milaza i Karoki fa fotoana hanaovana kanto vaovao ao Kenya izao. Miombon-kevitra amin'izany i Ng'ethu Star. Maneho ny fahatsapana fahadisoam-panantenana amin'ny toe-draharaha any Kenya, manoratra ny heviny momba ny Taratasin'i Tupac ho an'ny Filoha (fiteny manafintohina) i Udi.
- Wassapangaz manome fitokisana ho an'ilay bilaogera. Ditto Lidia.
- Martin Kimani miresaka momba an'i Putin sy ny “kanibalisma Afrikanina”.
- Haidhuru miresaka momba ny fitsabahan'ny tenindrazana. P.S.kosa mijery ny ambin'ny biloagy misy sary mahafinaritra ahitana ny fiainana andavanandro ao Kenya.